४१ वर्षीय शिक्षकको १५ बर्षिय विद्यार्थी संग सम्बन्ध थियो , जब पुलिसले अर्को कुरा थाहा पाए तब स्तब्ध बने ! « Etajakhabar
४१ वर्षीय शिक्षकको १५ बर्षिय विद्यार्थी संग सम्बन्ध थियो , जब पुलिसले अर्को कुरा थाहा पाए तब स्तब्ध बने !
तपाइँ प्राय सुन्नु भएको नै छ शिक्षक आफ्नो उनको विद्यार्थीको भविष्य बनाउनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन। शिक्षक र विद्यार्थी बिचको सम्बन्ध धेरै विशेष छ। विद्यार्थी पनि आफ्नो शिक्षकहरु संग निकै लगाव हुन्छ।
तर भर्खरै एउटा यस्तो खबर बाहिर आएको छ जो कसैलाई परेशान गर्न सक्छ। यो समाचार मात्र एक महिला शिक्षक र विद्यार्थी संग सम्बन्धित छ, तर यो धेरै अनौठो छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने ४१ वर्षीय ह्यारी क्लावी एक शिक्षक हुन् र उनी बिरु’द्ध एक धेरै गम्भीर अपराध छ। उनीमाथि १५ वर्षीया युवतीसँग अ’फे’यर र’हेको आरोप छ।
अझ अचम्मको कुरा यो हो कि यो अ’फेयर पछि उनी गर्भवती भएको खबर छ। हाल उनी ८ महिनाकी ग’र्भ’वती छिन्। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ। शिक्षकलाई मात्र एक नाबालिग संग यौ’न स’म्बन्ध रा’खेको आरोप छ। शुक्रबार ह्यारीलाई पक्राउ गरी बिद्यार्थीहरु बि’रुद्धको अपराध, बाल सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने, विद्यालयमा ब’न्दु’क ल्याउने र बाल यौ’न दु’र्व्य’वहारको आरोप लगाइएको थियो।
यस बाहेक, पुलिस यो थाहा पाएर स्त’ब्ध छ कि पीडित बच्चा शिक्षक वि’रु’द्ध कुनै प्रकारको आरोप लगाउन तयार छैन। ती युवतीले पुलिस अनुसन्धानमा पनि सहयोग गरिरहेकी छैनन् र उनी भन्छिन् कि उनी पीडित छैनन् र उनी ब’ला’त्कृत भ’एकी छैनन्। फ्लोरिडा पुलिसका एक प्रवक्ताले भने कि फ्लोरिडामा एक नाबालिग सम्बन्धमा सहमत हुन सक्दैनन्।